21 SAVAGE: NDINGUYE> NDANDIYI-ALBHAMU YOKUHLOLA - IINDABA
Icwecwe lesibini elivela komnye wabavakalisi abathembisayo baseAtlanta limkhumbuza njengenkwenkwezi elindile. Ubhala ngokucace gca nangoburharha, kwaye iingoma zakhe apha zomelele, zinobuchule, kwaye zinamathele.
Umkhondo omdaka kakhulu, ovula i-21 Savage ilungile kwaye ijolise kakhulu ndingu> bendikhona , iyacamngca ingakhange ibe yidrama, ilusizi kodwa ayiziphathi kakuhle. Ngesinye isikhathi, i-26-ubudala ubudala ibalisa ngokubulawa komntakwabo omncinci kunye nendlela eyayijijisana ngayo nengqondo yakhe, kodwa wenza njalo ngendlela ethandwayo, njengokuthetha nonyango esele lazi iinkcukacha ezincinci. Yitoni enkulu ukubetha kuqala: i-moody kancinci yokususa.
Ekuqaleni komsebenzi wakhe, umlobi waseAtlanta wabonakala ngokukodwa njengesiqhelo -ilizwi lakhe yayisisithuthi esomileyo ngo-2016 Indlela engathandekiyo Uvavanyo lweMetro Boomin kwitempile kunye nesandi esijikelezileyo. Ngamanye amaxesha, isibheno se-21 sachazwa kude njengohlobo lobunyani bobufishism, ngokungathi ukubulawa okuluhlaza emculweni yayiyeyona ndawo iphambili yokuthengisa. Kwinyani, uchithe iminyaka embalwa edlulileyo esakha umntu okhathazwa yintlungu kunye nobundlobongela kodwa engakhathazeki malunga nokuqikelela ukuba ubukhuni kangakanani okanye ulumkile okanye uyathandeka okanye woyikwa njani. Iirap zakhe ziqinisekile. Iingoma ezimalunga neklabhu yokuqhekeza-ezinje ngeesampulu ezintathu ze-6, i-Yung Miami -ukubonisa i-a & t-zilungile kuba zilungile iingoma zeklabhu ezitshixwayo hayi ngenxa yokuba zihleli kwi-self-awareness okanye i-PTSD.
I-21 ngumbhali osebenzayo kuba akaxhonywanga kwinto yonke ithetha-unomdla ngakumbi kwindlela izinto eziyiyo, indlela abavakalelwa ngayo: umgodi esiswini sakhe xa ecinga ngejele, ubunzima bezacholo zakhe esandleni sakhe. Uyangcungcutheka kodwa ufuna ukuya kwiklabhu, uyamthanda umama wakhe kodwa kananjalo nabakhuseli bakhe, kwaye uzimisele ukuzihlola ezo ziqingatha zakhe ngaphandle kokusebenzisa u-whoa, zimbini iihafu zam njenge-crutch ebalisayo. Ke ingxelo ekwisihloko- Ndimkhulu kunam -Ukulahlekisa kancinci. Le asiyirekhodi malunga nokuziphucula njengenqanaba eline-12 elinemiphumo engummangaliso. Xa imalunga nantoni na, imalunga nokuziphucula njengomncinci, umzabalazo oqhubekayo apho uziphikisa kwaye utye umsila wakho.
Indlela i-21 echaza ezona nkcukacha zintle zexesha lakhe elidlulileyo ayinakoyikisa xa eyihluza ngetoni engalindelekanga. Uya kudlwengula malunga neenkumbulo ezoyikisayo ezothusayo kukungathathi cala kwabo: Emuva ngemini endandiqhele ukuphanga ndingenasigqubuthelo kwi / Shit esihlahleni sam? I woulda wabulala yonke indlu ngenxa. I-21 iye yagqobhoza nzulu kwingqondo yakhe yengozi (jonga Vala Amehlo am okanye i-Numb ukusukela ku-2017's Issa Albhamu ) ukuba iimodyuli ezifihlakeleyo kwindlela athetha ngayo ngeedemon zinokuba nefuthe elibi. Kwi-asmr, waqhekeza, Zonke ezi zidumbu zandifumana izinto ezingaqhelekanga ezinesandi kwilizwi lakhe elenza kubonakale ngathi sele eza kwazisa umdaniso omtsha, kwaye mhlawumbi ukhona.
Ezo tweaks zincinci zilumkile, kodwa azinanto kulungelelwaniso oluzenzekelayo kwilizwi lakhe. Ngaphambi Indlela engathandekiyo , Ezingama-21 zazingazange zitshixelwe kwirejista enzulu kangako kwaye ukuhamba kakhulu kwaba laconic. Ukusukela ukuba adume, ugqibezele ukwahluka kweshumi elinambini kwisitayile sakhe sokuhlebeza, efumana uluhlu olupheleleyo lwamandla apho umculi omncinci oza kuvela njengelinye inqaku elibuhlungu. (Cinga ngama-21 njengo-Meek Mill olinganayo ngokulinganayo: Inani lezinto ezenziwayo kunye nokwahluka uMeek azisa kwimivalo yakhe yokugcwala zizinto ezifanayo ezingama-21 azisa kwisotto voce raps zakhe. 21's ifumene indlela yokukhupha ngaphandle kokophula isimilo, wasineka kwikhamera ngaphandle kokuvumela ilizwi lakhe ukuba liqhekeke kwaye livakale isandi. Oku kuyamnceda ukuba athengise iziqhulo zobuqhetseba azipelepele kuyo yonke: On ngekhe ahambe ngaphandle kwayo yedwa, uthi ugcina intonga efana ne-hobo kwaye aqhayise malunga nompu wakhe obhalwe ngu-Osama Bin Laden.
Kukho amanqaku apho ndingu> bendikhona iphantse ibe yimpumelelo; break da law, i-Offset duet 1.5, kunye nezahlulo zezinye iingoma ziya kuzika kwiifomathi zemveliso ezinxibe kakuhle ziye zaba ziiruts; ingoma efana nompu womsi ingaphaya kwama-21 kwi-autopilot. Ezo blip zilungile xa kuthathelwa ingqalelo ukuba uninzi lwerekhodi luyonwabisa ngomculo. Indawo emnxebeni 2 my momma is irresistible, and good day-which samples Lord Infamous ' Ndilahlekile , Ingoma yama-21 ibinokubhalwa kobunye ubomi-yenza ukusetyenziswa okumangalisayo kokubini kweProjekti Pat kunye nelizwi lika-Schoolboy Q Kukho bonke abahlobo bam, eyona nto ibonakalisa iPost Malone, ngokungathi inokulandela Iinkwenkwezi zerokhu ngqo phezulu kwiitshathi.
ndingu> bendikhona uyayichitha ingcamango ye-21 Savage njengengcali ene-purview emxinwa kunye nabaphulaphuli, kwaye amkhumbuza njengenkwenkwezi elindile, konke ngaphandle kokumnyanzela ukuba enze ukungqubana okungathandekiyo. Ikwambeka njengestylist esingaphezulu kakhulu kunamanye amathemba avela eAtlanta, njengoLil Baby noGunna, ababonakala apha kunye kwaye bavakala ngokulula njengabafundi abancinci beThug. Okona kungcono, i-albhamu isekhona mangalisi , njengaxa i-21 idlwengula ngokunyanisekileyo ngaphezulu kweSantana, okanye xa iphela nge-Young Nudy duet evakala kulo lonke ihlabathi njengesenzo sesithathu se-Morricone entshona. Leyo yingoma apho ama-21 ehlekisa ngabarepha abalahla i-mixtape, emva koko bathambisa ubuso babo. Ifika kwezona mbono ziphambili zomsebenzi wakhe: Awunakhohlisa abantu ukuba bacinge ukuba awunguye.
imbewu zothando iinyembezi zoloyiko
itafile encinci yedesika yetaylor ekhawulezayo
UFreddie gibbs kunye nemadlib bandana
kendrick lamar damn intsingiselo
Uhambo lwetaylor olukhawulezayo lomthandi